Bentley wuxuu doonayaa inuu dgn u noqdo mid caan ah - Geofumadas
Bentley wuxuu doonayaa inuu dgn u noqdo mid caan ah
Oktoobar, 2010 Microstation-Bentley, egeomates My
Sannadkii hore Waxaan hadlayay waxa uu u maleynayay inuu Bentley ka dhaadhicin karo qaabkiisa I-modelka. Sannadkan, qiiqa way cadahay, iyo maxay tahay, ka dib markii natiijooyinka isdhexgalka ee suuqyada dhawaan sida eB loo arkay, Hore iyo ka faa'iideysiga weyn ee xml ee suurtogalka ah.
Sanado badan DGN ayaa format aad u gaar ah oo u gaar ah Bentley, inkastoo V7 la isbahaysiga OpenDGN laga yaabaa in loo gudbiyo codsiyada kale, version 8 weli waa gaar ah in shirkadaha waaweyn in ay leeyihiin isbahaysiyada istaraatejiga sare heerka, sida kiiska AutoDesk, Oracle iyo ESRI. inkasta oo ilaa hadda uun loo akhriyo ama la dhoofiyo, laakiin maaha in la saxo. dadaallada Opensource iyo ganacsiyada yar yar ayaa ku hadhay ku maqnaa, iyo in ay dhacdo muuqaalada XML gundhig in xfm ilaa iyo haatan ayaa la kulma aad Bentley.
Laakiin sida uu yahay dhaqankan cusub ee sannadkii la soo dhaafay, Bentley mar dambe ma uu doonayo in uu baaqi ku format gaar ah oo uusan rabin in uu sii daa wax kasta oo ku kici isaga u hesho in ay leeyihiin V8, taas oo ka dib markii in ka badan 10 sano ay u muuqataa in ay uuraysatay mar. Maxaa yeelay, model ah fikradeed oo ka mid ah I-model, waxa uu muujinayaa si cad u sheegay in uu doonayo in uu Bentley ajende teknoolajiyada interoperability hadda u ogolaan, iyada oo aan laga badiyay waxa ay had iyo jeer buun buunin ah: sax (sax), laakiin ma doonayaan oo kaliya in lagu arko by injineerada , haddii qaabkeedu uu leeyahay macluumaadka aasaasiga ah ee biilasha dadka kale ee isticmaala (is-ogsoon). Dhibaato xoog leh haddii uu u shaqeeyo inuu ku fuulo doonta doonida kuwa waawayn iyo albaabada u furan kuwa yaryar kuwaas oo horeyba u cambaareynaya labada sheeko oo kala duwan.
Qiiqa asaasiga ah: Bentley wuxuu rabaa pdf
Waa gabagabeynta hordhaca ah ee aan fahmi karo. Waxa uu rabaa in uu faafiyo qaab sida Acrobat pdf, sida AutoDesk dxf, sida png, sida txt !!! Laakiin kii isbedelay Ma aha in la sameeyo gawaarida cusub ee GNU laakiin si ay u sameeyaan barnaamijyo badan oo akhriya waxa ay isticmaali karaan.
Geofumadas: Ma qorshaynaysaa inaad abuurto qaab cusub oo dgn ah oo leh qaabka I-model ama 64?
Bentley: Dhab ahaantii, V8 DNG waa mid cajiib ah.
(Waa la soocaa 2010, miiska wareega mashruuca)
Sababtan awgeed, Bentley waxay raadineysaa qaybta I-model ee dgn si ay u yeeshaan sifooyinka adeegsiga. Haatan dgn waa la arki karaa oo waxqabadka aasaasiga ah ee zoom, pam, dooro, isbeddel, sumcadda iyo dib u eegista xogta. Tani macaamiisha khafiif ah:
Windows Explorer (laga bilaabo Windows 7)
Dabcan, waxaa la fahamsan yahay in barnaamijyada CAD / GIS / CAM iyo database-yada aysan arki doonin dgn, laakiin joometeriga iyo sifooyinka xml ee habka loo isticmaalo.
Qiiqa celceliska qiiqa, Bentley wuxuu ku dhacaa shaxda shanaad
Tani ma aha arrin cusub, taniyo waqti ka hor waxay ahayd in ay isku dayday in ay isku xirnaanta Control Control (SCADA) u gudbiso xogta. Tani, dhammaan barnaamijyada Bentley waxay leeyihiin awood ay ku dhaliyaan I-model, taas oo ay ku jiri doonaan heerkan isdhexgalka waqtiga socodka, wax soo saar iyo wareegga nolosha.
Bentley sidoo kale wuxuu bilaabi doonaa Navigator ProjectWise. Ilaa hadda waa u bilaash dadka isticmaala ruqsadaha firfircoon iyada oo loo marayo SELECT, waxaan u maleynayaa inay sii wadi doonto inay noqoto ama ay lahaan doonto qiimo macquul ah si ay dadka aan Bentley ah u arki karin awoodda ka dambaysa I-modelka. Navigator waa guusha Bentley View oo ah mid asal ah, kadibna waxa loo badalay Bentley Redline, laakiin iminka awoodaha wax badan oo ka badan inta la arko, si loo qoro oo loo daabaco:
Waxaad akhrin kartaa qaababka dgn, dwg, dxf; waxaana u maleynayaa in ay noqon doonto wax badan. Heerkan, PW Navigator wuxuu ku yaalaa heerka aasaasiga ah (3D) ee waxa uu sameeyey, inkasta oo aad sidoo kale arki karto xogta xogta la xidhiidha walxaha iyo laga yaabo inay noqoto mid asaasi ah.
Xaggee laga yaabo in ay tahay in labada heer ee kale, waayo, haddii DGN ayaa ahbaa la I-model laxamiistaha, waxaad ka arki kartaa qaababka gaar ah si heer macaamil ah (4D), ay awoodaan in ay la macaamilaan indhaynta iyo kaydinta xogta nidaamo ah gudahood hannaanka la xakameynayo inta lagu jiro fulinta ama hawlgalka (5D).
Qiiqa qiiqa: Bentley wuxuu rabaa in uu tago darajada shanaad.
Haddii ay tahay DNA caadi ah, kaliya astaamaha asaasiga ah ee xubnuhu waa la arki doonaa, sida midabka, dhumucdiisnaanta, heerka, mudnaanta, buuxinta, isbaarooyinka, iwm. Sidee loo arki doonaa dwg, dxf iyo geopdf? Taasna waxaan fahamnaa ikhtiyaarrada si ay u awoodaan inay u arkaan, bixiyaan, u leexiyaan / duleelaan, dhejiyaan, rogaan, daabacaan, iwm.
Laakiin haddii la daaweynayo Revit ama Staad, dabeecadaha edbinta ayaa la arki karaa. Sidoo kale haddii uu loola dhaqmo Inroads, Map Bentley, Architecture, iwm. sidaa daraadeed hababka kala duwan ee kala duwan ayaa loo fulin karaa isla DNG.
Iyadoo tan Bentley ay isku dhejinayso darajada afaraad, sababtoo ah sifooyinka casriga ah, ansixinta, dib-u-eegista, digitally saxiixo iyo dukaanka taariikhda dhaqdhaqaaqa badan leh waxay ku daraan cabbirka afaraad ee loo yaqaan Time.
Laakiin Bentley ma joogayo halkan oo wuxuu ku darayaa cabbirka shanaad, taas oo la barbar dhigi karo qiimaha dhaqaale, waxsoosaarka ama wareegga nolosha gudaha dashboardka. shay yeelan karaan sadex dhinac iyo waqtiga way isbaddali (koraan) ama dhowraan da'da dabiiciga ah, laakiin xaqiiqada ah in wax soo saar (tarmin), qayb ka mid ah durdur ahaan ama hayn taariikh qiimaha dhaqaale waxa la eegayo shanaad cabbir Dareen ahaan asaasiga ah, isku xir dhexdhexaad iyo dayactir iyadoo loo marayo kaabayaasha caqliga.
Tusaalaha asaasiga ah ee miisaaniyaddu waa miisaaniyadda mashruuc, si tartiib ah loogu dhafo xisaabinta tirooyinka naqshaddan. Ka dibna xakamaynta dilka, helitaanka alaabooyinka, maaraynta qiyaasaha hore iyo kantaroolka xakamaynta hawlaha. Ku qor waxa uu sameeyo NeoDATa laakiin leh qalabixinta sheyga (ma aha tirinta aasaasiga ah ee 2D).
Waayo, Bentley this barayaa Aset falsan, kaas oo ku biiraya labada waxyaabaha kala duwan u yimid in ay ogaadaan ilaa hadda (Microstation iyo Project falsan). Bentley ayaa ku dhawaaqday in ay isdhexgalka la leedahay mashruuca Microsoft iyada oo aan ka qaadan karno isku xidhka xalalka miisaaniyadda iyo raadinta mashruuca. waxaa sidoo kale xoojinay by qarniga daabacaadda firfircoon (firfircoon InterPlot) jidaynayey map a in loo diray daabac laga yaabaa in la dhexgalo qalin caadiga ah waa isku dhafan camera si toos ah redline, indhaynta ama ansixinta iman.
Maxaan u qaadan karnaa in yimaado
Anigu ma filayo in aan ka yaraado Bentley, oo kalluunkoodu aad u yaryahay; mararka qaar aad u badan in ay u muuqato in qaar ka mid ah dhibic ay naqshadeeyayaasha ayaa lahaa fallaag "Dhibtu waa qabow, waxaanu nahay injineerada oo dhan"
Laakiin waxaan dareemi karaa sigaarka, ficil aad u faa'iido leh,
iyadoo macnaheedu yahay in Bentley aysan dooneynin in ay sii ahaato software kaas oo isticmaala qaabab qurux badan. Waxa uu rabaa in DNA-da uu ogaado isaga oo ah qaabab caan ah oo la yaqaan. Waxaan rajeyneynaa inaan sii wanaajinno fududeynta isbedelka istaandarka.
Kadibna waxaan u maleynayaa in fikradu ay tahay mid weyn, ma ahan in la horumariyo qaab cusub. Tani waxaan horey u maleynay, (waxaan si xaddidan u xusuustay V7 marka wax waliba 16 ah, iyo V8 markii ay horay u jireen 32); Way fiicantahay in la ogaado in aan sii wadi doono inaan aragno V8 muddo dheer. Iyo in this, waxaa hadhay in la aqoonsado soo jeedinta Bentley, in uu I-model, taas oo mar dambe (oo u baahan ka badan) XML qaadan DGN sifooyinka in barnaamijyada kale la soo qaadaa arko, hoos fikirka caadiga ah iyo BIM
Waxa ugu fiican ee la soo jeediyey waa in dukumiintiyada iyo SDK ee abuuritaanka I-model ka codsiyada kale ay heli doonaan dhinac saddexaad. Tani waa inay albaabka u furto mawduuca, iyadoo la adeegsanayo heerarka sida CIS / 2, IFC, iyo ISO 15926. Laakiin waxaa laga yaabaa in aan ugu dambeyntii aragno barnaamijka kharashka iyo miisaaniyada ku habboon Microstation; mawduucaan Wax badan ma arag.
Ugu dambeyntii waxaan qabaa in ay wanaagsan tahay in Bentley aysan helin badeecooyin badan oo kala duwan. Laga soo bilaabo wixii aan arko codsiyada khariidadaynta, dhismayaasha, biyaha, dhirta, geologyka iyo farsamooyinka kale waxay sii wadi doonaan inay fuliyaan kaalintooda gaar ah ee alaabooyinka aasaasiga ah ee hadda gaaray saddexda:
Microstation ee saddexda cabbir ee aasaasiga ah ee heerka macaamiisha.
ProjectWise geeddi-socodka wax-qabadka iyo dhex-dhexaadinta heer dhexdhexaad ah.
AssetWise geeddi-socodka macaamilka dibadda, ku xiran ama xiran.
AutoDesk Bentley Systems Dgn Dwg ESRI egeomates My
Post Previous«Previous Muujinta twitter: Soo Dhawow
Post Next AutoCAD waxay ku noqotaa MacNext »
2 Jawaab: "Bentley wuxuu doonayaa in uu dgn noqdo mid caan ah"
Malaha waxba kama jiraan. Isla sidaas ayaa lagu samayn karaa codsiyada labada nooc: naqshadeynta buundada, daadadka daadka, hirarka dhismaha, iwm.
Oo kii farxaana isagu waa ka wanaagsan yahay kii isweyneeya.
Waxaa laga yaabaa inay kugu caawiso haddii aad mashruuc aad u socoto oo aad samaynayso horumarinta maaraynta macluumaadka khaaska ah halkaas oo aad ku aragto shirkado la shaqeeya AutoDesk iyo kuwo kale oo leh Bentley.
Iturbe isagu wuxuu leeyahay:
Dilemma Anigu waxaan isticmaalaa waqti dheer AuToCAD. Maxuu Bentley iga baran lahaa?